Akhriso:-War-murtiyeed laga soo saaray Madasha Wadatashiga Hannaanka Qaran – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Akhriso:-War-murtiyeed laga soo saaray Madasha Wadatashiga Hannaanka Qaran
By Radio Dalsan Reporter	 On Jul 23, 2019
Madasha Wada-tashiga ee Hannaanka Qaran-Wadajir, wuxuu si weyn ugu faraxsan yahay inuu si habboon u qabsoomay kulanka Wadatashiga dib-u-eegista iyo dar-dar
gelinta jadwalka geedi socodka dhismaha goloyaasha deegaanka, Maamul Baahinta, Machadka Dowladaha Hoose, dhaqan-gelinta Hannaanka Dhab-u-heshiinta Qaran, arrimaha xasilinta iyo helidda xalka waara barakacayaasha, dadka dalka kusoo
laabaanaaya iyo qaxootiga.
Kulan hawleedkan ayaa ahaa kii 13-aad ee noociisa ah oo lagu qabtay magaalada Muqdisho, mudadii u dhaxeysay 22 – 25ka Luulyo 2019.
Madashu waxay bogaadinaysaa kasoo qayb galka dhammaan ergooyinka kala duwan ee Federaalka, Dowlad Goboleedyada iyo Gobolka Banaadir kaalinta ay ka qaateen natiijada ka soo baxday kulan hawleedka Hannaanka Qaran ee Wadajir.
Kulankan, oo ka socday muddo 4 maalmood ah magaalada Muqdisho, waxaa ka soo baxay qodobada hoos ku qoran:
1. Madashu waxay tacsi u diraysaa qoysaskii dadkii ku wax yeeloobay qaraxyadii isxig-xigay ee ka kala dhacay Muqdisho, Kismaayo iyo Dhuusamareeb.
2. Madashu waxay isku bogaadisay howlaha uga qabsoomay xog wadaagista, dhisidda goloyaasha deeggaanka, maamul-baahinta, machadka dowladaha hoose, arrimaha xasilinta dalka, dhab-u-heshisiinta iyo arrimaha xalalaka waara ee barakacayaasha iyo qaxootiga.
3. Madashu waxay isla garatay in xalka waara ay muhiim u yihiin hannaanka iyo taabba gelinta dowladaha hoose.
4. Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Federaalka iyo Dib-u-heshiisiinta waxay leedahay doorka xiriirinta iyo dhaqaale u raadinta, xalalka waara iyadoo kaashanaysa Wasaaradaha Arrimaha Gudaha ee Dowlad Goboleedyada, Gobolka Banaadir,
hay’adda qaxootiga qaranka iyo kuwa Dowlad Goboleedyada.
5. Madashu waxa ay hoosta ka xariiqday in gaabis badan uu ka yimid dadaalka taageerada dhisidda golayaasha deegaanka, isla markaasna madashu waxay ku baaqday in taageero farsamo iyo mid dhaqaale oo buuxda la siiyo golayaasha deeggaanka ee dhismaya iyo kuwa dhismay.
6. Madashu waxay bogaadisay dadaalka samaynta halbeegyada lagu cabirayo horumarrada ka socda degmooyinka ee loo yaqaan (FIMM).
7. Madashu waxay hoosta ka xariiqday ahmiyadda ay leedahay in la mideeyo dukumiintiyadda addeegga dadweynaha ee ka soo baxa dowladaha hoose ilaa heer gobol.
8. Madashu waxay fariin u dirtay hay’adaha dowladda Federaalka Soomaaliya ka taageera arrimaha dhisidda goleyaashaa deegaanka, maamul baahinta, machadka dowladaha hoose, xasilinta, dhab-u-heshiinta iyo xalka waara in ay ku shaqeeyaan mudnaanta dowladda heerarkeeda kala duwan.
9. Madashu waxay soo jeedisay in la dedejiyo dhamaystirka iyo hawl-gelinta Machadka Dowladaha Hoose si loo helo tababbaro ku filan degmooyinka dhismay iyo kuwa dhismaya.
10.Madashu waxay soo dhoweysay in madasha laga qayb-geliyo Wasaaradaha Haweenka iyo Xuquuqul Iinsaanka ee heer Federaal iyo heer Dowlad Goboleed, si loo xoojiyo kaalinta ka qayb-galka haweenka ee dhismaha dowladaha hoose.
11.Madashu waxay isku raacday in si wadajir ah looga wadashaqeeyo arrimaha dhisidda goleyaashaa deegaanka, maamul baahinta, machadka dowladaha
12.Madashu waxay bogaadisay daahfurka Golayaasha deegaanka ee degmooyinka Ceelberde, Warshiikh, Beledweyne iyo Jowhar.
13.Madashu waxay isku raacday in la adkeeyo wadaagga xogta iyo macluumaadkau dhexeeya hay’adaha heerarka kala duwan ee dowladda.
14.Madashu waxay isku raacday in la sameeyo guddi farsamo oo leh ujeedooyin midaysan iyo qorshe dhamaystiran oo lagu fulinaayo taageeridda, dhisidda iyo dhamaystirka golayaasha deegaanka.
15.Madashu waxay adkaynaysaa xaqiijinta kaalinta haweenku ku leeyihiin geddi socodka iyo dhismaha dowladaha hoose.
16.Madashu waxay u mahad celinaysaa barnaamijka raadiyaha Wadajir iyo hawl-wadeenadiisa oo had iyo jeer baahisa guulaha madasha iyo deeq bixiyaasha.
17.Sidoo kale maadashu waxay isla garatay in la qabto dib-u-heshiisiin siyaasadeed, mid
Sirdoonka Israel iyo Uganda oo gacanta ku dhigay Nin Ganacsade ahaa
Muwaadin u dhashay Eritrea oo lagu dhaawacay Jarmalka